သတင်းလွှာအမှတ်7ပွဲတော် Edition ကို 2018 - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းလွှာအမှတ်7ပွဲတော် Edition ကို 2018
Rewarding News ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကိုကြိုဆိုပါသည်။ သင့်အတွက်သတင်းများစွာနှင့်သတင်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် Twitter feed နှင့်အပတ်စဉ်ဘလော့ဂ်များကိုပင်မစာမျက်နှာရှိနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများကိုသင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ Edinburgh ရှိ Wintry Night တွင်မှော် Scott Monument ကိုခံစားကြည့်ပါ။ တုံ့ပြန်ချက်အားလုံးကို Mary Sharpe မှကြိုဆိုပါသည် mary@rewardfoundation.org.
ဒီ edition အတွက် အထွေထွေ Practitioner-အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏တော်ဝင်ကောလိပ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ Porn အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အသိအမှတ်ပြု သုတေသနမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှူငှပေး အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, Porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကိန်းဘရစ်ချ်, အင်္ဂလန် Frankfurt, ဂျာမနီ ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်, အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ ကျောင်းများတွင်အလုပ်မှာ မိဘတွေအတွက်အကူအညီ CEO ဖြစ်သူအဘို့ဆုချီးမြှင့် မီဒီယာပွဲ ဘီဘီစီ Alba ကနေဂျူလီ McCrone Ruairdh Maclennan နဲ့ Mary ရှပ်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တက် setting 2019 အတွက်အနွေးဆုံးသောဆန္ဒများ
ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်ကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် 10 RCGP-အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ပွေးလေ၏။ ငါတို့ကဲ့သို့ဝေး afield ဖင်လန်, စတိုးနီးယား, ဘဲလ်ဖတ်နှင့်နယ်သာလန်အဖြစ်မှပျံသန်းလူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကို GPS, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, ကျောင်းသားများ, လူငယ်လုပ်သားများ, လူမှုရေးအလုပ်သမားများ, ဆရာ, ဆရာမ, တိုင်ပင်မှူးမတ်, ရှေ့နေများနှင့်လိင်ကုသပါဝင်သည်။
Glasgow ရှိအဖွဲ့ TRF သည်အက်စတိုးနီးယားရှိ Eesti Tervishoiu Muuseum မှလိင်ပညာပေးသူနှင့် Katelfin Küttနှင့် Belfas မှပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းပြ Matthew Cichyt ကိုကျနော်တို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ဝမ်းသာခဲ့ကြသည် လူငယ်နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးတို့အတွက်ရေးစင်တာ အဆိုပါ Glasgow အလုပ်ရုံနှင့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Anderson က Strathern အဆိုပါ Edinburgh တဦးတည်းပါ။ ငါတို့သည်လည်းအတူတစ်ဦးအလွန်အထောက်အကူမိတ်ဖက်ခဲ့ အနောက်တောင်တိုင်ပင်ဝန်ဆောင်မှု ကျနော်တို့ကြောင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းပြန်လာကြလိမ့်မည်ရှိရာ Killarney ၌တည်၏။ စိတ်ဝင်စားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပိုမိုပြုလုပ်လိုသည့်ဆန္ဒကကျွန်ုပ်တို့ကိုအားရစေပါသည် သင်၏ဒေသသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလာရောက်စေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက်ရက်စွဲအသစ်နှင့်နေရာအသစ်များသတ်မှတ်ထားစဉ်မကြာခင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ Killarney ရှိ SouthWest Counselling Center မှ Darryl နှင့် Mary နှင့် Joy O'Donoghue နှင့် Anna Marie O'Shea တို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ Porn အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အသိအမှတ်ပြု ဤသည်ဇွန်လကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကရောဂါများ၎င်း၏အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD-11) တွင်အစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" (CSBD) အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုပါ ဘလော့ဂ် ဒါဟာပေါ်မှာ။ ဒါဟာသိပ် porn အစဉ်အဆက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုငျကွောငျးငွငျးပယျသူကို sexologists အပါအဝင် Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံ porn စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ချိတ်ဆက်အကျိုးစီးပွားအုပ်စုများအနေဖြင့်ပြင်းစွာသောအအတိုက်အခံကြားမှသိပ္ပံနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကတဆင့်စီမံခန့်ခွဲ။
သုတေသနမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှူငှပေး အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုသစ်ကိုသုတေသနပြုစောင့်ကြည့်မသာ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းအထောက်အကူပြုနှင့်သိရန်လိုအပျသူပညာရှင်များကရရှိနိုင်ပါစေ။ ကြောင်းအဆုံးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ် စက္ကူသော4မှာတင်ဆက်သုတေသနအကျဉ်းချုပ်th အပြုအမူစွဲအပေါ်နိုင်ငံတကာညီလာခံ (ICBA) ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive။ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါသည် ဘလော့ဂ် ဒါဟာပေါ်မှာ။ သငျသညျအပြည့်အဝစက္ကူမှဝင်ရောက်ခွင့်ချင်ပါတယ်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျနော်တို့ကအလားတူစက္ကူယခုနှစ်5ကနေနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနစာတမ်းများစုစည်းတင်ပြရန်ကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်နေကြသည်th ICBA ညီလာခံအားလုံးအစောပိုင်း 2019 အတွက်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း, တင်သွင်းခဲ့ပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့သည့်အခါသိစေပါလိမ့်မယ်။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, Porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အင်တာနက်စွဲလမ်းဖို့ autistic ရောင်စဉ်အပေါ်လုလင်တို့သည်မြင့်မားလည်ပတ် Asperger ရဲ့ Syndrome နှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့၏အအားနည်းချက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုမှရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားထံမှအာရုံကြောအခြေအနေကဒီမျိုးနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုသားသမီးများ၏ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများပိုင်သောပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးအခါ, အဲဒါကိုဤလူဆကျဆံအဖြစ်အများအပြားဓာတ်အားမလုံလောက်မှုတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိပါတယ်သိသာဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့ရေးထားပြီ တော်တော်များများ ဘလော့ဂ်များ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ။ ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုပါများလွန်းတဲ့ မိခင်ရဲ့ပုံပြင်။ TRF မှခရီးစဉ် ကိန်းဘရစ်ချ်, အင်္ဂလန် ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူမာရိရှပ်၎င်း၏သမ္မတဂျက်ကီအက်ရှလေ၏ဖိတ်ကြားချက်အရယခုနှစ် Lucy Cavendish ကကောလိပ်, ဇွန်လအတွက်ကင်းဘရစ်မှာစကားပြောဆိုရန်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ မာရိကရှိထားတဲ့တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၏ခေါင်းစဉ် အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် အစဉ်အမြဲအကောင်းတစ်လူအစုအဝေး puller ဖြစ်ပြီးသေချာလုံလောက်အောင်, ကောလိပ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သူ 90 တက္ကသိုလ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလူထုဟောပြောချက်အစဉ်အမြဲကောလိပ်မှာအကြီးဆုံးလူအစုအဝေးထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်မာရိသည်ဂုဏ်အသရေ၏ဧည့်သည်တော်ရှိရာကောလိပ်ကျောင်းထမင်းစားခန်းထဲမှာတရားဝင်ခန်းမညစာပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်ကျောကင်းဘရစ်အတွက်ဖြစ်ဖို့ကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏။
Frankfurt, ဂျာမနီ Amazon ရဲ့မအဖြစ်ကျနော်တို့ (ယုံကြည် အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ရဲ့စာရင်း) ဂယ်ရီ Wilson ကယ့်စာအုပ်ပြုလုပ် အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုပတ်လည်ကိစ္စရပ်များကိုရှင်းပြသောစျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များရာပေါင်းများစွာနှင့်ကောင်းစွာသိပ္ပံကရှင်းပြခဲ့သည်နှင့်အတူကဘာသာရပ်ကအရမ်းလက်လှမ်းစေသည်။ (ပြီးသားဒတျချြ, အာရနှင့်ဟနျဂရေီအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်အခြားသူတွေ) အခြားဘာသာစကားများအတွက်မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးဖို့ကျနော်တို့ဂျာမနီရှိ Frankfurt စာအုပ်တရားမျှတသောတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသုံးဝင်သောကလူအများကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့်လာမည့်နှစ်တွင်သူများအဆက်အသွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်, အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျောင်းသားများ fWe မှာစပီကာဖွစျဖို့ဝမ်းသာခဲ့ကြ လိင်ကျန်းမာရေးတိုးဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်၌ (ခါးပန်း) နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကဒီအောက်တိုဘာလကကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာအပေါ်ယနေ့အထိသင်တန်းသားများကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ရှိရာအမေရိကန်နိုင်ငံပညာရှင်များများအတွက်ကျောင်းများနှင့်အခြားအလုပ်ရုံလှုပ်ရှားမှုများဘို့စီစဉ်နေပါတယ်။ မာရိကရှပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီအီးအို, ဒီအဖှဲ့အစညျး၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ရေကန်ကိုဖြတ်ပြီးဤမြေကွက်၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူယနေ့အထိတက်တတ်၏။ ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ TRF ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်အတွက်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် NGO အဖွဲ့ ergo အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်နိုင်ငံတကာကွန်ဖရမှာပါပြောဆိုရန်ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရဖို့ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ မာရိရဲ့စက္ကူလူကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ပေါ်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ပဲရစ်နှင့်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေကလေးကအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်စပီရှိခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်းအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စင်တာမှအရုဏ် Hawkins က
ကျောင်းများတွင်အလုပ်မှာ TRF သည်သင်ကြားရေးကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးလွတ်လပ်သောပြည်နယ်နှင့်ပြည်နယ်အဆင့်များမှကျောင်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာ (၆) ခုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းများသို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာရောင်းချခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်၊ ပေါ်လစီ Hub ပွဲတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် sexting ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။
မိဘတွေအတွက်အကူအညီ ဒီမှာ ဘလော့ဂ်အဓိကအားဖြင့်အခမဲ့အရင်းအမြစ်များကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှတစ်ဦးကိုမိဘများ '' လမ်းညွှန်။ ဒါပုံမှန်ထွက်ကိုကြည့်ပုံမှန် updated ရဲ့။
မာရိကရှပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီအီးအိုတစ်ဦးအဘို့အအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်ရှေးခယျြခံခဲ့ရ NatWest WISE100 တစ်ဦးရှေ့ဆောင်အသစ်သောလယ်ပြင်၌ရှိသောသူမ၏အလုပျအတှကျမိနျးမသဆု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့စတင်ကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပါသည်။ မီဒီယာပွဲ ဘီဘီစီ (TV နဲ့ရေဒီယို), Daily Mail က, အဆိုပါ Times သတင်းစာ, လန်ဒန်ညနေပိုင်းသတင်းနှင့်အခြားသတင်းဆိုင်များတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုပါ မီဒီယာစာမျက်နှာ အသေးစိတ်ကို။ မာရိသည်နွေဦးရာသီများတွင်ကလေးများနှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုဘီဘီစီစကော့တလန်အပေါ်တစ်ဦးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဘီဘီစီ Alba ပေါ်တွင်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီ Alba ကနေဂျူလီ McCrone Ruairdh Maclennan နဲ့ Mary ရှပ်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တက် setting 2019 အတွက်အနွေးဆုံးသောဆန္ဒများ The Reward Foundation မှ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သူငယ်ချင်းများက ၂၀၁၉ အတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒများကိုလိုချင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတွစ်တာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ပါ @brain_love_sex။ သငျသညျကနျြးမာရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်သူမည်သူမဆို၏သိလျှင်အကြံပြုပါ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်.
2019 အတွက်အနွေးဆုံးသောဆန္ဒများ The Reward Foundation မှ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သူငယ်ချင်းများက ၂၀၁၉ အတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒများကိုလိုချင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတွစ်တာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ပါ @brain_love_sex။ သငျသညျကနျြးမာရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်သူမည်သူမဆို၏သိလျှင်အကြံပြုပါ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်.
မူပိုင်ခွင့်© 2019 အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်း All rights reserved ။ သင်တို့သည်ဤအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရယူပုံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုပါသလား?